SIDEE LOO GALAY XABAALIHII MAQAAL XIISA BADAN ? by Khadar C/laahi Badeed | Halganka Online
Ayaamkan danbe waxa si wayn oo kala dan iyo dareen ah loo hadal hayaa falal ay qabuuro caan ahaa ku bur-buriyeen xarakatu shabaabul mujaahidiin oo aynu hadda wixii ka danbeeya usoo gaabsan doonno X.SH.M.
qabuurahan ay gacanta u qaadeen X.SH.M dadku way ku qaybsameen nin allena dareenkiisa ayuu ka hadlay , qaar dan ay horeba u lahaayeen ayay ku akhriyeen dhacdadan iyagoo ka fog bu,da sheekada iyo biya-dhaca waxa ay sameeyeen X.SH.M , canaan iyo cay aan loo miidaan dayin ayay rag halkan isla taageen , halka ay qaarna isla soo taageen (gacantu idinma go,do ) waanay bogaadiyeen tallabadan ay qaadday xarakadu.
hadaba intaynaan hore ugu marin masuuliyadda qabuuro nadiifinta iyo halka ay ku aadantahay aynu ka hor marino sadex erey oo aan is leeyahay waxay xidhiidh dhaw la aleedahay qadiyadan.
intii aanay soo shaac bixin baaqa islaam u noqoshada ee ay hogaaminayeen dhallintii kasoo sharaabtay jaamacadaha xijaaz iyo masar waxa ka jiray arliga ay somalidu degto qabuuro iyo xadrooyin aan lagu kala bixin kuwaasoo ay hogaanka u hayaan rag cilmi iyo diin loo aaminsanyahay.
wixii ka dhici jirayna sheeko innaguma aha ee waxa loo wada joogay in afrta daafood ee geyiga laysaga imanayay si ruux kastaa muraadkiisa u gaadho yacnii ruuxba baahida uu qabo ayuu ula imanayaa qabriga isago ku rajo wayn inaanu ku hungoobin karaamada sheekha aasan (duugan) ee tobanaan sano ka hor looga tegay cidlada iyo camalkiisii waaba haddii ay run tahay in maha cidi ku aasantahay maxaa jira waxa la xaqiijiyay in la ziyaarto goobo aan aadameba ku xabaalnayn.
waxyaalihii u horeeyay ee ay ku dhawaaqeen dhallintii aqoonta toosan xambaarsanayd waxa ay ahayd in lala dagaalo qabuurahan xadkoodii la dhaafiyay , waxa ay aayad iyo xadiis u cuskadeen in xabaalaha loo tago keliya in loosoo duceeyo dadka dhintay , innaguna kusoo waana-qaadano.
rag allow intaas ma laysku waafaqsanaa?? . ragii xaabalahan dul fadhiyay ee dadku u jeebeysnaayeen hadalkan ma soo dhawayn oo way ka dhiidhiyeen waxaanay lug iyo farasba isugu taageen sidii ay usii haysan lahaayeen qabuurahan meheradoobay , waxaynu isla garanay in lagu magacaabo wixii ka dhacayay xabaalaha dushooda (shirki iyo bidco) loona baahanyahay in la tir-tiro . rag allow ma jirtay mise maya ??.
xaqu waa hal aan laboobin , ma guur-guuro cid gaar ahna ma raaco oo ciddii qaadata ayuunbuu la jiraa innagana ay tahay inaynu garab istaagno , abaal laynooguma qabo middaas oo waa waajib sharci ah innaguna cid abaal kaga dooni mayno oo badbaado aakhiro ayaynu ku rabnaa , in badan ayaynu akhrinay aayadaha alle ku leeyahay (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى ) waxa aynu macneheeda naqaanaa aayaddaa alle yidhi :
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) waxa midaas soo raacda in la kala saaro dhaqanada qaar aanad la dhacsanayn ee ay raga qaar sameeyaan iyo humaagga guud ee hab-dhaqanka yacnii waa laba kala ah manhajka guud iyo denbiyada hal-hal u yimaada ee ka dhaca dadka ku ab-tirsada tusaale ahaan hadii uu wiil yar muslim ahi uu khaldo salaad casar ama uu xilligeeda ka hor tukado ma nacaysaa haduu maqrib saxo xilligeedana tukado ?? sida xaal yahay hadaan eego HAA ayay jawaabtu tahay.
balse waxa sax ah in casarna halkiisa lagu saxo maqribna madaxa loogu salaaxo . waxaan u jeedaa : xaqa iyo caqiidadu way ka sareeyaan danaha ururada , dadka iyo is riix-riixa laga yaabo inuu ku dhamaado natiijo ama natiijo la,aan , marka arrin kan oo kale ahi dhaco waxa waajib ah inaynu ku eegno aragtida shareecada innagoo ka reebayna nacaybka ama jacaylka aynu u qabno cid gaar ah .
culimadii diinta inna soo gaadhsiisay waxa ay innaga mudanyihiin in habeen iyo maalinba loo duceeyo allena looga baryo inuu qabuuraha unuuro una waasiciyo intooda dhimatay inta ka noolna cizzi iyo caafimaad ku nooleeyo , abaal laysu galo oo aan la gudi karini waa ruux aqoon diineed kugu gacan-qabtay , culimadaasi intii ay soo qabteen iyo rafaadkii ay soo u soo mareen fidinta diintu waa midaan la qarin karin si kasta oo ay aadame u ahaayeen alle denbigooda ha dhaafo innagana aqoontii ay inoosoo xambaareen haynagu anfaco.
haddaynu mawduuca usoo laabanno : markii arimahani dhaceen dadku waxay u qaybsameen sadex qaybood.
dad kal iyo laab kusoo dhaweeyay tallaabadan kuna tilmaamay guul usoo hoyatay sunnada iyo dharbaaxo lala beegsaday wejiga shirkiga , qoladani aad uma hadlaan dhawaqooduna meel dheer ma gaadho , waayo waxa ay badankoodu isku xidheen taageerada X.SH.M urur ahaan iyo in la dheho alla magane tani waa tallabo wanaagsan (gacantiin ha socoto ) .
dadka cadhooday oo qaylo iyo qalalaase ka qaaday . qoladani iyagu markii horeba dagaal ayay ka xigeen in lasoo qaado xabaal iyo qabri ayuu khalad ka dhacaa , sidaas darteed culays badan ma laha waayo waxa laysku diidanyahayba asalka mas,alada iyagu dood iyo muran uma baahna waayo hore ayay usoo dhamaatay .
qoladani waxa u sawaxan badan isku dhafka isku magacaabay ahlu suna waljameeca oo iyagu meel waalli ah ka istaagay illaa ay qaarkood BBCda kaga dhawaaqeen in ay X.SH.M diinta ka baxeen oo ay gaalo yihiin , waxa kale oo ay doodooda udub dhexaad uga dhigeen been aad wayn oo ah inay X.SH.M iib geeyaan lafaha wadaadada oo ay soo qaateen mashruuc gaalo ku lug leedahay.
allaa inna dilaayee shabaab iyo gaalo intay iska kaashan karaan ???!!!!!! iyaga odayashan garawshiiyo loogama fadhiyo , waxa iyana gadaal kaga soo biiray xukuumadda ku meelgaadhka ah oo iyada lafteedu ku qasbanaatay inay saas yeesho waayo hadii kale waxa furmaya inta yar ee isu haysa iyaga iyo isku dhafka ahlu-suna waljameeca .
dadka shacabka ah oo aan iyagu si cilmi ah u fahansanayn mas,alada laakiin alle mahaddii hore looga dhergiyay waajibka innaga saaran qaabuuraha .
dadwaynuhu had iyo goor waxay u bataan xaga hadal hayntu u badantahay sida xooganna hadii masaa,ilka loo siyaasadeeyo hore ayay ugu qancaan oo iskuma xidhaan waxyaalaha isku xidhka u baahan ee si sahlan ayaa irbadda loo dhaqaajiyaa.
qodobkan hadii aynu ku eegnana waxa inoosoo baxaya sida ay ugu saamoobeen dacaayadaha idaacadaha iyo dadyawga ay sida tooska ah isu hayaan X.SH.M .
qolo sadexaad oo u yaab badan : waxay hal meel ka yidhaahdeen HAA iyo MAYA , allow haa iyo maya meel hanagaga wada keenin ayay somaliyi ku ducaysan jirtay.
hadaad ka yaabtay amba waan la yaabee waa rag ku xisaabsan saxwada oo muddo ku bar-baaray kuna bar-baariyay ardadooda in lala jihaado shirkiyaadka oo si wayn u aqriyay halgankii uu sh. Max/ed bin c/wahaab la galay qabuuraha lagu talx tagay.
xadrooyinka iyo goobaha loo weeciyay xaqii alle , si ay wax ka noqdeenba waxay ku dhex halaabeen sax iyo khalad kala muuqda , u malayn mayo inay mas,alo ahaan uga laabteen oo ay qaateen wax wixii hore ka duwan balse waxa ay ku dhex lumeen loolan ay dhan ka noqon kari waayeen amase dhaliil uga muuqatay cidda qabuuraha gacanta u qaadday.
waxay xaqiiqdu tahay inaanay waxyaalahani mar-masiio u noqonayn ciddan amase aanay mas,uuliyadda ka cafinayn , waayo tawxiid iyo shirki lama dhex-dhexaadiyo , si kastoo aad wax u dhaliilsanyahayna lama aqbali karo inaad ka degto diillinta cagaaran ee kala badha xaqa iyo baadilka .
Intaa kadib : xabaalaha waxa laga qabtay intaan ka xog hayo laba arrin : (A) in la dumiyo dhismayaasha ka dul qotoma xabaasha kuwaas oo qaarkood ku dhawaayeen guryha loo hoydo . (B) in lasoo faqo lafihii ku jiray qabriga si loogu aaso meel kale oo ka qarsoon indhaha dadkii hore ugu ibtiloobay ama si loosoo af-jaro ku talax tagga xabaalaha.
labadan arrin ayaana u baahan in loo iba bixiyo ama diin ahaan loo eego si aynu isula taagno darafka ku garta leh arrinkan ugana durugno caadifadda iyo cid fogaynta .
innagoo soo gaagabinayana aynu nidhaahno
xukunka duminta dhismaha qabuurha
Wallaahi ayaan darro ayay ila tahay inaynu maanta wakhti siino mawduucan oo nus qarni ka hor ay culimadu si hagar li,ya banaanka u keeneen,dadka badankiisuna u haysteen in laga fara-xashay waxa ay Somali dhexdeeda ka noqotay wax iska cad oo cidda ka muranta hal mar indhaha lagu wada dhufto,laakiin cajiib maantana waa tan!!! .
Masaladani waxa ay ku xidhantahay ta kale ee ah : xabaalaha guudkooda dhisme mala saari karaa ? jawaabteeda oo gaabani waa MAYA waxaana si go,an inoogu sheegay rasuulkeenii mux/ed ahaa waxaanu ku tilmaamay dadka sidan sameeya kuwa ugu sharka badan arliga guudkiisa sida ku sugan bukhari iyo muslim . culimada isalaamka ee aqoon iyo alle ka cabsi loo ogyahayna ma jiro mid ka hadhay oo iftooday in xabaalaha la dhiso .
iyadoo sidaas ay tahay ayaan hadana la yeelin kolkaasbaa waxaad aragtay laga guud dhisay , iyana shareecadu waxa ay ka qabtaa in dhulka la dhigo oo xabaal loo ekeysiiyo , sayid cali bin abi-dalib ayaa hawl qabuuro habayn ah u diray ninkii la odhan jiray abilhayaaj al-asadi waxaanuu ku yidhi ( waxaan ku farayaa wixii rasuulka alle SCW I faray ( qabriga aad aragto ee dhisan dhulka la sin sanamka aad aragtana dumi ) sidaas ayaa laysu soo gaadhsiinayay masaladan , had iyo goor waxa aynu isku maaweelinaa waxaynu nahay shaaficiya iyadoo hadalkeenu u dhiganyahay shaaficiyadu way nala ogoshahay bidcooyinka ay ka midka tahay qabuuro dhisidda , si aynu hadaba taas meesha uga saarno aynu xusno culimo magac wayn ku leh madhabka oo sib ba,an u weeray falkan bidcada ah , ragas waxa ka mid ah :
imaamu shaafici laftiisa . sida uu ku xusay kitaabkiisa (Al-Um)
ibnu-xajar sida ku cad kitaabkiisa al-zawaajir .
waxa kamid ah ibnu rushdi , ibnuladruci
iyo qaar kale oo badan.
waxay dhamaan carabka ku xoojiyeen in lagu dhakhsado duminta dhismayaasha dul yaalla xabaalaha . taasi waa taas
Ma la faqi karaa xabaalaha ???
Ugu horayn aynu isla qirno in ruuxa muslimka ahi ixtiraam mudanyahay nolol iyo geeriba , nolol waa la wada yaqaan halka islaamku dhigay , hadii uu mayd noqdana karaamdani kama guurayso ee way la god-gelaysaa.
waxa dhimatay haweenaydii nebiga ee maymuunah kolkii la qaaday janaazadii ayuu c/laahi bin cabaas oo meesha taagnaa ku yidhi qoladii nacashka qaadaysay ( tani waa xaaskii rasuulka SCW ee marka aad nacashka kor u qaadaan ha ruxina hana gil-gilina ee si dabacsan u qaada ) nin dhintay kabihiisa dhaama waa gaalada ee innaga ma aha .
xuquuqda uu leeyahay ruuxa muslimka ahi waxa kamid ah in loo daayo goobta ugu danbaysa ee uu aduunka ka degay waa qabrigee , asal ahaanna waa xaaraan in ruuxa qabrigiisa laga soo saaro balse waxa jira xaalado dhawr ah oo asalkaa ka baxaya lana ogolaaday in qabrigii dib loo faqo.
xaaladaha qaarkood waxa raacsan in maydka laga soo saari karo luxudka oo meel kale loo rarikaro , xaaladahan waxa loo qaybiyaa laba qaaybood :
1- in qabriga loo faqo si looga soo saaro wax gudaha xabaasha ku jira sida hanti lala aasay maydka , ama hadii loo baahdo in baadhitaan danbe lagu ameeyo maydka si loo ogaado cidda dishay , tan danbe waa mas,alo casri ah oo u baahan baadhitaan dheeraad ah sida uu qabo Dr ahmed nagiib.
waxa iyana kamid ah oo dib loo faqi karaa qabriga hadii lagu soo iloobo qalabkii xabaasha .
2- in qabriga loo faqo si looga raro meesha uu yahay waxana kamid ah xaaldahan :
hadii ay meeshu noqoto
– biyo mareen .
– meel bahaluhu faqaan .
– goob nijaaseed ,
– xabaalaha oo isu badala kuwo gaalo
Waxa iyana la soo saari karaa hadii looga baahdo goobta xaabalaha dan guud oo lagama maarmaan ah , waxa reeban in lagu dheereeyo soo fagista xabaalaha muslimiinta hadaanay jirin baahi adigoo aanay jirin meel looga weecdaa .
Aynu u nimaadno masaladeena ah ma la soo saari karaa mayd sheikh wayn oo dadku ku ibtiloobeen qabrigiisa , HAA oo waa la soo saarayaa iyadoo laga duulayo.
xaaladaha aynu soo sheegnay ee la ogolaaday in dib loo soo saaro maydkii . xaaladahani marka la ogolaaday in la soo saaro hadaad u fiirsato waxa ka mudan in la badbaadiyo caqiidada muslimiinta.
waa run oo ruuxa muslimka ahi waxa uu leeyahay xushmo culus balse ha iloobin in diinta iyo caqiidadu ay tahay ta u mudan aduunka guudkiisa iyada ayaana lagu waajibiyay inuu naftiisa u huro.
sidaas darted hadii ay kulmaan dhawrista qofka iyo ilaalinta diinta waxa la horaysiinayaa tan diinta.
sida la ogsoonyahay ragii ku shahiiday duulaankii uxud waxa loo aasay laba-labo.
ragii halkaas ku shahiidayna waxa kamid ah jaabir bin c/laahi aabihiis oo si yaab leh ulasiidar-daraamay wiilkiisa jaabir , markii dagaalki dhamaaday ayuu rasuulku nin kale iyo c/laahi xabaal wadaajiyay.
kaadibna jaabir waxa uu dib u fagay xabaashii aabihii ku jiray lix bilood kadib isagoo kusababeeyay inaanay naftiisu ku deganayn inay aabihii qof kale xabaal wadaagaan.
hadaba hadii ay sugnaatay in jaabir bin c/laahi dib usoo saaray aabihiisii saxaabiga ahaa ee hadana ku shahiiday uxud – ma la yaabantahay in lagu dheho waar sheikh Somali ah oo dadku si kale u arkeen sheekhnimadiisii kuna lumeen qabrigiisii halasoo saaro si loosoo afjaro fidnada gaalnimada u socota ama iyadiiba ah .
dhacdooyin badan oo taariikhda muslimiinta soo maray oo sidan oo kale loo soo xidhay albaab shaydaanku u furay aadamaha ayaa iyana loo weheshan karaa talaabadan ay qaadeen X.SH.M , si aanu qoraalku u dheeraan aynu soo qaadanno hal tusaale:
Kolkii ay asxaabtu furteen TUSTUR ee carriga Faaris waxa ay muslimiintii mujaahidiinta ahayd halkaa ka heleen xabaashii DANYAL oo culimada badankoodu ku sheegeen inuu ahaa mid ka mid ah anbiyadii reer banii israil.
Qabrigii markii ay qodeenna waxa ay ugu tageen kitaab , Abul-caliya waxa uu yidhi : aniga ayaa aqriyay kitaabkaan waxana ku yaallay xaaladaheena iyo dhaqamadeenna iyo weliba kala gedisnaanta luqadeheena. Waxa ay asxaabtu soo weriyeen in ay sidoo kale xabaasha ugu tageen udug iyo caraf aan caadi ahayn.
laakiin intaasba waxa ka darnaa inay sheegeen inaanu haba yaraatee jidhkiisi is bedelin. Markii intaasi dhacday ayaa Abu-musa al-ashacari oo kamid ahaa colka magaalada qabsaday ayaa waraaq u diray Cumar bin khadaab si uu ugu sheego arrinka DANYAL .
Cumar waxa uu soo amaray in ay asxaabtu maalinimada qodaan dhawr iyo toban xabaalood oo la arkayo, kolka habeenku soo galana mid ka mid ah lagu aaso si aanay dadku ugu fidnoobin oo aanay salaad iyo cibaado ula tegin.
Warkan waa mid sugan waxana qalinka ku duugay raga loo dhaafay kala hufidda wararka waxana laga xusi karaa , ibnu-kathiir , ibnu xazmi , Al-albaani iyo qaar kale oo badan.
Halkan waxa aad uga jeeddaa laba arrin oo cajab leh.
Cidda qabriga laga soo saaray waa nebi anbiyada alle ka mid ah oo dabcan ka maamuus badan wadaadan Soomaaliyeed, labada sababoodna waa isla hal
Cidda falkan ku kacday waa asxaabtii rasuulka oo dabcan ka qiimo badan X.SH.M.
Cid kale waxba ha waydiine bal intaas uun fiiri , waxaanad is waydiisaa talow raggan xabaalaha u ooyayaa maxay fali lahaayeen hadday maalintaas joogi lahaayeen.
Waxa sax ah hadalkii uu yidhi sheikh abwaan abshir nuur faarax bacadle ( nimankaasi waxa ay qabteen wax aysan abid qaban dawladihii soo karay Soomaalida.
Gun iyo gunaanad :
waxa aan ku gunaanadayaa hadalkan :
arimaha Somali ka dhacayaa waa cajiib oo waxa ay u baahantahay in si degen loola socdo
is diidada dhex taal dadka ay dhextaal xeedhada maslaxada warkooda ay iska sheegayaan haloo dhug lahaaado oo yaan si sahlan dabin loogu dhicin ,
waxa laysku baacsanayaa hadii ay diin salka ku hayso kolkaaba suuqa waxa yaal iyo wararka ay idaacaduhu lalinayaan haku salayn mawqifkaaga .
waxaan ku talinayaa in alle looga baqdo mawaaqifta laga qaadanayo dhacdooyinka is daba haya ee dalka ka socda , Somali waa iska cadday oo dhex isma taagto , ama waa inaan ku wada raaco ama waa inaan kuwada naco, arinkaasna sax ma aha mar kasta .
raga qaarkii ayaa dhihi oo maxaa xabaalaha layskaga mashquulinyaa arligiba wuu qasanyahaye , laakiin waxay iloobeen ama ay is illawsiiyeen in sababaha jaahwareerka keenay ay kow ka tahay waxyaalaha ka dhacaya qabuurahan dushooda
waxaanay kala sixiwaayeen ka muhimsan nafta iyo diinta .
Sheekh Khaddar c/laahi badeed
var addy92786 = 'cagaarane' + '@';
addy92786 = addy92786 + 'yahoo' + '.' + 'com';
document.write( addy92786 );
// ]]>cagaarane@yahoo.com //
« Wilaayada Gobolka Hiiraan oo dagaal kula wareegtay Xero Maleeshiyaad lagu tababarayay Hub farabadan oo ay Mujaahidiintu halkaasi kasoo qaniimeesteen. maleeshiyada dowlada ridada oo dhac iyo boob u gaystay dadka rakaakbka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho »